SaaS Startup Zeew nke Egypt Dabere na Egypt Relifining Ecosystem nke North Africa
SaaS Startup Zeew nke dị na Egypt na-agbanwegharị usoro nzipu ugwu nke Africa
Site na mbuso oria ojoo nke COVID-19 nke webatara oge mkpọchi a na-enwetụbeghị ụdị ya, nnyefe zuru ụwa ọnụ gbanwere ọhụụ ọhụụ ka ọhụụ ndị ọzọ bịara pụta ìhè nke hụrụ nnyefe nke ndị mmadụ n'ofe ụwa, ọkachasị n'Africa.
Anyị gara ọmụmụ ihe anyị na Cairo, Egypt iji hụ ọnọdụ nke usoro nnyefe nke mba ahụ ebe anyị jidere Mohamed Ghaith, Onye guzobere na onye isi oche nke Zeew, a nnyefe mmalite.
The mmalite si arụ ọrụ na ihe nlereanya nke Sistem / Software dị ka a Ọrụ (SaaS) ụlọ ọrụ ụdị onwe ya dị ka “Uber maka nchịkọta” dị ka ọ na-enye na-ina mbupu site na ama ngwa.
Ikpo okwu na-enye ndị ọrụ ya ohere ibuputa ụgbọ nke ha na-ebugharị ngwongwo n'ime obodo ha nke gụnyere nnyefe sitere na azụmaahịa na ndị ahịa (B2C) na ndị ahịa nye ndị ahịa (C2C).
Leveraging technology, mmalite awade ya ọrụ nhọrọ nke na-anapụta ihe ha chọrọ na mgbe ha chọrọ ya.
Dabere na Mohammed, Zeew bidoro na Nọvemba 2017 dị ka ụlọ ọrụ B2B na-achọ ụlọ ọrụ nnyefe ikpeazụ maka obere azụmaahịa, na-elekwasị anya na ụlọ ahịa ifuru, ụlọ ahịa ịchọ mma na ụlọ ahịa akwụkwọ.
Ibido a dịkwa na Estonia yana nke Jenụwarị 2018, ọ ghọrọ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ mmalite Europe ịnye teknụzụ nnyefe eburu na-achọ wuru na Ethereum blockchain. Ka ọ na-erule ọnwa Machị 2018, mmalite ebidola ihe karịrị ndị ọchụnta ego 2,000 n’elu ikpo okwu ya.
"Mgbe nke ahụ mechara, anyị ghọtara na ina nri nnyefe otú anyị lekwasịrị anya na ikpeazụ-mile nnyefe maka ụlọ oriri na ọ soonụ soonụ n'oge na-adịghị mgbe anyị kpebiri ịghọ aggregator onwe anyị na ulo oru anyị onwe anyị nri nnyefe n'ọma ahịa."
Mohamed kọwara n'ihu na mbido ahụ malitere site na njedebe nke 2019 n'ihi asọmpi dị elu.
“Anyị wuru nnukwu teknụzụ site na mkpa anyị ma anyị kpebiri ịnye ya ọha na eze dị ka ịkwụ ụgwọ otu oge na mbido mana n’oge na-adịghị anya anyị chọpụtara na ọ siri ike ịkwado ọtụtụ ndị ahịa na koodu dị iche iche wee banye na SaaS kemgbe ahụkwa, anyị erutela mba iri asaa + dịka ọ dị taa. ”
Ihe mmepe a emeela ka mbido Cairo na-eduga na teknụzụ nnyefe na-achọ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ gburugburu ụwa.
Fọdụ n'ime ngwaahịa ya gụnyere:
Akwụkwọ nnyefe nri
Akwụkwọ nnyefe ọgwụ
Otu Storelọ Ahịa akwukwọ
Nile na nnyefe
Na Jenụwarị afọ a, Zeew welitere mkpụrụ ego ọnụọgụ isii site n'aka mmụọ ozi na-etinye ego na Estonia yana dị ka onye guzobere ya si kwuo, a ga-eji ego ahụ mee ihe n'ịzụkwu ahịa na ndị otu na-aga, yana ịkwalite nkwụsi ike ngwaahịa nke Zeew na atụmatụ ya. .
Isi banyere nnyefe na mbupu na North Africa
Onye guzobere ya kọwara na North Africa na ọkachasị Egypt bụ nnukwu ahịa, yana ọtụtụ nsogbu ịma aka, na-ekwupụta n'ihu na ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ edebeghị otu ihe ịga nke ọma dị ka ndị obodo.
Dị ka ya si kwuo, ọnọdụ na-eto eto na-ebugharị nri n'Ijipt ma n'aka nke ọzọ, enwere mmụba n'otu aka ahụ na nnyefe ọgwụ na mba Africa ndị ọzọ dịka Mozambique, Ghana na ndị ọzọ.
“Na oria ojoo a na mgbanwe nke agwa ndị ahịa, ugbu a ndị mmadụ dị njikere ịzụrụ na ịntanetị ma nata zụrụ ha na nkasi obi nke ụlọ nke aka ha, o nyekwara ndị ọrụ azụmaahịa ohere ire ngwaahịa ka mma, ugbu a ndị ahịa nwere ike ịnyagharịa asntanetị dị ka ọtụtụ ụlọ ahịa dịka ha chọrọ ma kpebie nke ha ga-azụta na. ”, Mohamed kwukwara
Ọrịa na-efe efe na nnyefe na-achọ
Mohamed kwuru na COVID-19 manyere ndị azụmaahịa ịkwaga ahịa ha na-anọghị n'ịntanetị na ịntanetị, yana iwepụ ihe mgbochi maka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ka ha nwee ntụsara ahụ n'ịzụ n'ịntanetị.
“Banyere Zeew, anyị aghaghị ịmụ banyere omume ndị ahịa iji mepụta ngwaahịa ka mma. Ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji usoro anyị eme ihe na mba 70 + na mba ọ bụla nwere omume dị iche iche nke ndị ahịa, ụzọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche, ma ọ bụ ọbụna atụmatụ / ọrụ dị iche iche. ”
Ọdịiche nke Zeew
na ihe Zeew dị iche na ndị na-asọmpi ya, Mohamed kwuru okwu isiokwu, “Akpaaka”,
“Nke a bụ isi DNA anyị, sistemụ anyị nwere ike ịba ụba n'ihi na ihe niile na-akpaghị aka. Onye ọ bụla nwere azụmaahịa nwere ike ịga webụsaịtị anyị wee banye.
Ha ga - ahụ ụlọ ahịa ya ka naanị ya kee ya na Dispatcher sistem iji na - elekọta ngwa ahịa ya niile. ”
Dabere na onye guzobere ya, ọtụtụ ndị na-asọmpi Zeew na-enye naanị sistemụ ịtụ mana ọ bụghị onye ezipụ iji jikwaa nnyefe ahụ emesịa.
Ya mere Zeew na-enye ndị ahịa ya ikpo okwu iji jikwaa azụmahịa ha niile site na otu dashboard nchịkwa.
Mmechi onye guzobere gwara anyị na mmalite mmalite nke Cairo bipụtara mmemme reseller n'oge na-adịbeghị anya nke na-enye ndị ọchụnta ego ọ bụla ohere ịmalite azụmaahịa ha site na ịregharị sistemụ mmalite nke usoro akpaaka n'okpuru ngalaba nke aka ha na akara aka ha, ọbụnakwa setịpụrụ ọnụahịa reseller ha. Ọ na-ewe ụbọchị 1 iji malite ya.
Featured Image: Mohamed Ghaith, Onye guzobere na CEO nke Zeew